Ii-FAQs -QHANQO YENQAKU YENQAKU EQINISEKILEYO CO, CO.
Kwiisampulu, ixesha elikhokelayo limalunga neentsuku ezisi-7. Kwimveliso yobuninzi, ixesha elikhokelayo ziintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo ayasebenza xa sifumene idipozithi yakho, kwaye ke sinemvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu okuhola awasebenzi kunye nomhla wakho wokugqibela, nceda ugqithise iimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
Unokwenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, kwi-Western Union, kwi-PayPal, kwi-TT okanye kwi-LC